Onyankopɔn Dwen Wo Ho Anaa? (Dwom 40:​17)
Onyankopɔn Dwen Wo Ho Anaa?
“Meyɛ mmɔborɔni ne ohiani. Yehowa na odwen me ho.” *—TETE ISRAELNI DAWID
“Amanaman te sɛ bokiti mu nsuko biako.”—YESAIA 40:15
Wohwɛ a, na ɛtɔ asom sɛ Dawid bɛka sɛ Onyankopɔn dwen ne ho? Wo nso ɛ? Onyankopɔn dwen wo ho? Nnipa pii wɔ hɔ a, wonnye nni sɛ ade nyinaa so tumfoɔ Nyankopɔn paa bedwen wɔn ho. Adɛn ntia?
Ade baako ne sɛ, yɛde nnipa toto Onyankopɔn ho a, yɛmmɛn no koraa. Ade yi, amanaman mpo, sɛ Onyankopɔn fi soro hwɛ wɔn a, ohu wɔn “sɛ bokiti mu nsuko biako, na obu wɔn sɛ nsenia so mfutuma bi kɛkɛ.” (Yesaia 40:15) Nhomakyerɛwfo bi a onnye Onyankopɔn nni mpo de, ɔkaa sɛ: “Obi gye di sɛ Onyankopɔn bi wɔ hɔ a odwen ne ho a, ɛnde na onii no nso de, odua bo papa.”
Ebinom nso wɔ hɔ a, wɔn suban nti, wɔn adwene yɛ wɔn sɛ wɔmfata mpo sɛ Onyankopɔn bebu wɔn ho akontaa. Ɛho nhwɛso ne ɔbarima bi a wɔfrɛ no Jim. Ɔkae sɛ: “Ná metaa bɔ mpae sɛ [Onyankopɔn mma] me abotare na mintumi nhyɛ me ho so, nanso mehu ara na me bo asan afuw. Enti mibenyaa adwene sɛ, bɔne adonnɔn me araa ma Onyankopɔn yɛ me hwee mpo a ɛrenyɛ yiye.”
Onyankopɔn, ɛyɛ ampa sɛ yɛn ho nhia no? Sɛn paa na obu nnipa a yɛnyɛ pɛ? Sɛ Onyankopɔn ankasa anyi saa nsɛm yi ano a, onipa biara ntumi nyi ano. Nanso, Onyankopɔn nam ne honhom so aka akyerɛ yɛn wɔ Bible mu sɛ ɔnyɛ obi a yɛn asɛm mfa ne ho, na mmom odwen yɛn mu biara ho. Bible ka mpo sɛ, “Ɔne yɛn mu biara ntam nware.” (Asomafo Nnwuma 17:27) Nsɛm nan a edidi so no bɛkyerɛ yɛn sɛnea Onyankopɔn bu nnipa. Ɛbɛma yɛahu sɛ odwen nnipa ankorankoro ho, na wo nso woka ho bi.
^ nky. 3 Dwom 40:17; Bible ma yehu sɛ Yehowa yɛ Onyankopɔn din.